Ngwongwo na-akpaghị aka ịkwụ ụgwọ | Atụmatụ Zeevou
atụmatụ » ịkwụ ụgwọ
Akwụ ụgwọ akpaaka
Ingnakọta ego site n'aka ndị ọbịa maka ọnụnọ ha adịghị mfe. Sitesfọdụ ndepụta saịtị na OTA na-anakọta ugwo na nnọchite nke ụsụụ ndị agha. Ọ bụrụ na ị ga-eme ya n’onwe gị, ọ nwere ike ibu ibu arọ. Ọ bụ ezie na ịnwere ike ịnakọta ịkwụ ụgwọ site na nnyefe ego ma ọ bụ na ego, nsogbu nchịkwa metụtara ya dị mkpa. Zọ kachasị mfe iji rụọ ọrụ nchịkọta ego bụ site na kaadị kredit / debit.
Imirikiti ndị na-eweta ngwanrọ na-enye ego ịnakọta maka ndị ọbịa maka ntinye akwụkwọ sitere na saịtị ndị ọzọ. Booking.com, ga-akpaghị aka na-akwụ ụgwọ nkọwa kaadị nke onye ọbịa zitere gafee onye njikwa ọwa site na ntinye API. Agbanyeghị, nke a pụtara na onye kpọrọ oriri enweghị ike ịchọpụta ma onye nwe kaadi kaadị ọ na-akwado azụmahịa a. Nke a na - eweta ụgwọ ebubo n'ihi kaadị eji zuru ohi ma ọ bụ nkwupụta aghụghọ nke ọbịa ahụ nabatara.
Okwu ọzọ gosipụtara ihe ịma aka maka ndị njikwa mgbazinye ezumike na-anakọta ego maka ndenye aha ozugbo ma ọ bụ ọrụ mgbakwunye. Debe ego nke ndị ọbịa nyere onwe gị ma ọ bụ ọwa na ebe ị na-ede akwụkwọ na-abụkarị usoro ntuziaka.
Kedụ ka ụgwọ Zeevou na-akpaghị aka ga-esi nyere aka?
Ihe Zeevou jikọtara usoro ịkwụ ụgwọ akpaghị aka na-akọwawanye ihe niile usoro ntinye akwụkwọ. Nwere ike zuru ike na edobela ihe niile tupu enyere onye ọbịa ohere. Zeevou Pay na-enyere gi aka ileba anya na ugwo, ma megharia nchikota ugwo maka ugwo ya ma obu ihe obula nke onye obia dechara.
Dịka akụkụ nke Usoro Nkwenye ntinye akwụkwọ 5-nzọụkwụ, a na-ezigara ndị ọbịa 3-D Linkkwụ Linkgwọ urekwụ uregwọ Dị uregwọ. Nke a na - enye gị ohere ịnakọta ịkwụ ụgwọ maka ntinye akwụkwọ na - abịa site na saịtị ndị ọzọ ma ọ bụ weebụsaịtị gị. N'ime usoro ịkwụ ụgwọ ahụ, ụlọ akụ nke onye nwe ya ga-enyocha azụmaahịa ahụ. Onye na - ejide kaadị ahụ gosipụtara n'ụzọ paswọọdụ ma ọ bụ koodu nzuzo zigara na nọmba ekwentị ha, ọ bụrụ na arụ ọrụ 3-D. Ọbụghị kaadị niile tozuru maka 3-D Secure. Ọtụtụ ndị na-enye ọnụ ụzọ ámá na anyị na-arụ ọrụ ga-enye gị ohere ịtọ ọkwa dị iche iche nke nchekwa chọrọ dabere na ego azụmahịa.
Usoro ịkwụ ụgwọ akpaaka Zeevou na-enye gị ohere ịbanye nkwụnye ụgwọ emere na mpụga nke sistemụ ahụ na ego, site na nnyefe ego, ma ọ bụ site na onye na-agụ kaadị. Can nwere ike bulite nkọwa nke azụmahịa ahụ dị ka oge e were ya, nrụtụ aka, ma tinye mgbakwunye ma ọ bụrụ na ịchọrọ. Ọ bụ ezie na Zeevou na-enye gị ohere iwepụ ego na ekwentị, ị kwesịrị ị ịme ya naanị ma ọ bụrụ na ị tụkwasịrị onye ọbịa ahụ obi. Ikwesiri ijide n'aka na ha anaghị eji kaadị ezuru ezu ma ọ bụ nwee ike iwalite ụgwọ ego.
Iji kwado ịkwụ ụgwọ maka ogologo oge, ị nwere nhọrọ nke ịtụgharị akwụkwọ kwa izu ma ọ bụ kwa ọnwa. A na-agbakọ okirikiri ahụ site na mbido ụbọchị ntinye akwụkwọ ma ọ bụ mmalite nke izu / ọnwa. Akụkụ Ntanetị mentkwụ Linkgwọ Na-enye gị ohere ịmepụta njikọ ịkwụ ụgwọ iji nakọta ịkwụ ụgwọ maka akụkụ nke ntinye akwụkwọ. Enwere ike iji ya ma ọ bụrụ na ọtụtụ ndị chọrọ ịkekọrịta ọnụ nke ntinye akwụkwọ, ma ọ bụ ọ bụrụ na ịchọghị ịnakọta ụgwọ ịkwụ ụgwọ n'ihu.